Shaki weyn oo soo ifbaxay iyo doorashada Golaha Shacabka oo markale si boob ah… - BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Shaki weyn oo soo ifbaxay iyo doorashada Golaha Shacabka oo markale si...
Shaki weyn oo soo ifbaxay iyo doorashada Golaha Shacabka oo markale si boob ah…
Shaki ballaaran ayaa la galinayaa in doorashadda dalka, gaar ahaan tan aqalka hoose ay ka baaqsato boobkii sababay, inuu qabsoomo shirka gollaha wadatashiga ee laga soo saaray 18- ka qoddob.
Shirka si weyn looguma lafa gurin, daah-furnaan la’aanta ka jirta doorashadda, waxaana taasi ay ka micno tahay, in aan masuuliyad dheeraad ah la iska saarin qabsoomida doorasho caddaalad ah.
Waxaa sidoo kale kulanka gollaha, aan lagu soo hadal qaadin, sida laga yeelayo kuraastii la boobay, oo ahayd arrinta dhalisay tabashada ugu badan ee doorashadda, waxaana wal wal badan laga qabaa in masuqii laga cabanayey uu sii xooggeysto.
Qubarada falanqeeya siyasadda ayaa sheegaya, in aan rajo badan laga qabin, qabsoomida doorasho daah-furan, iyagoo tilmaamaya in maamul kasta uu kursiga saaranayo kuwa ay wataan, taa oo ka dhigan in doorashadda lagu kala badin doono, iyadoo masuqa uu kaalin weyn ka qaadanayo suurta galnimada arrintaasi.
Midawga musharaxiinta, ayaa aqbalay qoddobadii ka soo baxay doorashadda, kuwaa oo aan wax ka baddel weyn lagu sameynin, arrintaas ayaana loo sababenayaa caddaadis uga yimid dhanka beesha caalamka, oo xilligan daneynaya oo keliya qabsoomida doorasho, magaca ay doontaba ha wadatee.
Si kastaba, waxaa la aaminsan yahay, in doorashadda dalka ka dhaceysa ay ka masuq badnaan doonto, tii dalka ka qabsoontay 2016-kii, oo dhaliilo kala duwan hawaneyd, waa mid aan la yaab ahayn marka laga hadlayo, dal bur bursanaa 30-sano, oo dadkiisuna ay siyaasad ku kala qeybsan yihiin.